Health and Beauty Products :: [Cetaphil] Gentle Skin Cleanser [ 500ml,1 liter ]
Home/Health and Beauty Products/[Cetaphil] Gentle Skin Cleanser [ 500ml,1 liter ]
[Cetaphil] Gentle Skin Cleanser [ 500ml,1 liter ]
Size : Cetaphil gentle Skin Cleanser 500ml Cetaphil gentle Skin Cleanser 1 liter (+15,050 Ks )
Minimum quantity for "[Cetaphil] Gentle Skin Cleanser [ 500ml,1 liter ]" is 1.
Mild, soap-free formula cleanses without irritation it won't strip skin of its natural protective oils or emollients
အသားရေကို ချောမွေ့ပြီး နူးညံ့စေတဲ့ cleanser ဖြစ်ပါတယ်။ ရေဓာတ်ကို အားဖြည့်ပေးပြီး သဘာဝအတိုင်းလန်းဆန်းစေမှာပါ။
၁. ရေမပါဘဲသုံးနည်း- မျက်နှာပေါ်ကို ကိုယ်လိုချင်သလောက် cleanser ထည်းပြီး ညင်သာစွာပွတ်ပေးပါ။ ထိူ့နောက် အဝတ်နုနုဖြင့် သုတ်ပေးပြီးနောက် ဒီတိုင်းထားလိုက်ပါ။
၂. ရေဖြင့်အသုံးပြုနည်း- မျက်နှာပေါ်ကို ကိုယ်လိုချင်သလောက် cleanser ထည်းပြီး ညင်သာစွာပွတ်ပေးပါ။ ထို့နောက်ရေဆေးချလိုက်ပါ။
အသားရကေို ခြောမှပွေီ့း နူးညံ့စတေဲ့ cleanser ဖွဈပါတယျ။ ရဓောတျကို အားဖွညျ့ပေးပွီး သဘာဝအတိုငျးလနျးဆနျးစမှောပါ။
၁. ရမေပါဘဲသုံးနညျး- မကျြနှာပျေါကို ကိုယျလိုခငျြသလောကျ cleanser ထညျးပွီး ညငျသာစှာပှတျပေးပါ။ ထိူ့နောကျ အဝတျနုနုဖွငျ့ သုတျပေးပွီးနောကျ ဒီတိုငျးထားလိုကျပါ။
၂. ရဖွေငျ့အသုံးပွုနညျး- မကျြနှာပျေါကို ကိုယျလိုခငျြသလောကျ cleanser ထညျးပွီး ညငျသာစှာပှတျပေးပါ။ ထို့နောကျရဆေေးခလြိုကျပါ။
[Cetaphil] Moisturizing Cream [ 100g,453g ]